Orodyahanka Ree Jamaica Ee Usain Bolt Oo Weerar Ku Qaaday Louis Van Gaal:Anigu Waligay Manchester United Umaan Ciyaareen Iyada Oo Van Gaal Uu Tababare U Yahay – STAR FM SOMALIA
Orodyahanka ree Jamaica ee Usain Bolt ayaan wax sir ah ka dhigan in uu maalin uun u ciyaaro kooxda Manchester United laakiin boqorka orodka ee Bolt ayaan waligii Man United u ciyaareen inta uu Van Gaal tababare ka yahay Red Devils. Bolt ayaa sheegay in uu jawaab u yahay gool yaraanta Man United wuxuuna kalsooni ka muujiyay in uu si fiican kubbada u maamuli lahaa isla markaana uu si deg deg ah ula ordi lahaa.
Usain Bolt oo ka hadlaya in uu kubbada cagta Man United u ciyaari lahaa ayaa yidhi: “Anigu waxaan filayaa in aan ku qurux badanahay, sababtoo ah anigu waan ku haboonahay, waan deg deg badanahay, waxaan awoodaa in aan kubbada maamulo iyo in aan fahmi karo ciyaarta oo dhan”.
Van Gaal ayaa sheegay markii ay Man United guusha ka soo gaadhay Liverpool in kooxdiisu ay ku guulaysan karto horyaalka Ingiriiska laakiin Bolt ayaa si xun u dhaliilay haanka ciyaareed ee Van Gaal wuxuuna muujiyay in aanu ka hoos shaqeeyeen tababaraha ree Holland.
Bolt ayaa yidhi: “Waa hagaag, aniga oo fiirinaya sida uu Van Gaal yahay, anigu ma filaayo in aan waligay dooni lahaa in uu Van Gaal tababare ii noqdo, sidaa daraadeed waxaan filayaa in aan arintaas iska joojin lahaa ilaa inta uu tababare cusubi imanayo”. Bolt ayaa sidan u sheegay warbaahinta.
Man United ayaa hadda kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka Ingiriiska iyada oo 7 dhibcood ka danbaysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Arsenal, waxayna sabtida Old Traffrod kula ciyaari doontaa kooxda Southampton.
Chris Smallingo Oo Amaanay Da’yarka Kooxda Man United Ee Cameron Borthwick-Jackson